I-Trillium Acres Cottage - I-Airbnb
I-Trillium Acres Cottage
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguRebecca
Xa iyi-131 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Ifumaneka kwiimayile eziyi-10 ukusuka kwidolophu yaseMorgantown kunye nebala. I-Rock yomlingane ikude ngeemayile eziyi-12, kunye nokunyuka intaba, ukuhamba ngebhayisekile kunye nokunyuka iliwa. Le ndlu isemaphandleni itofotofo enezinto onokuzisebenzisa zale mihla inokuhlala abantu abayi-4 abaneebhedi ezinkulu eziyi-1 nesofa enkulu.
I-Trillium Acres Guest House luhambo olufutshane oluya ehlathini elikufutshane, ukuze amaqela amakhulu adinga indawo yokuhlala engakumbi.
Indlu esemaphandleni i-Trillium Acres yindawo encinci kodwa efudumeleyo. Ingcamango evulekileyo, igumbi lokuhlala kunye nekhitshi likwamkela njengoko ungena endlwini. Ukwahlulwa kancinci kweyona ndawo yokuhlala ligumbi lokulala, kukho umnyango weglasi otyibilikayo ophumela ngaphandle usiya everandeni encinci.
Igumbi lokuhlambela nelokuhlamba iimpahla alikho kwigumbi lokulala.
Indawo evulekileyo yokwamkela iindwendwe ne-patio encinci ngasemva ikhuthaza umntu ukuba aphume aze onwabele indalo. Ngokuyintloko ezijikelezwe ngamahlathi kukho izindlu ezikufutshane, azibonakali kakuhle ehlotyeni ngenxa yezinto ezenzekayo.
Kukho enye indlu esendlini esetyenziswa nangabanye abantu. Le ndlu inendawo yayo yokupaka.
Izilwanyana zasekhaya zamkelekile! Sicela ukuba izinja zivuyiswe xa zingaphandle ibe siyakuxabisa ukwaziswa ukuba uza nezilwanyana zasekhaya. Kukho iinkukhu ezininzi ezingabhatalelwayo kwaye ngamanye amaxesha sineekati zethu ezivuzayo phandle.
I-wifi ekhawulezayo – i-131 Mbps
4.93 · Izimvo eziyi-148
Kukho abamelwane abaninzi abakufutshane, kodwa emininzi ayibonakali kakuhle ehlotyeni xa yonke imithi igcwele zizinto ezininzi. Ukudlula nje endleleni yindawo yokulawula iNyoka Hill Wilderness, kunye neendlela zokunyuka intaba kunye nokunyuka iliwa ukuba unezixhobo zakho. Ikwayindawo entle yokutyibilika ekhephini kwilizwe ebusika.
Indawo esecaleni kweTrillium Acres Guest House.
Sikwimizuzu emalunga ne-15 ukusuka eRock of Cooper, nemizuzu eyi-25 ukusuka ebaleni (kuxhomekeka kwindlela abantu abahamba ngayo)
Indlu iyazihlola ngekhowudi yomnyango. Ndiyabulela ukwazi ixesha lakho lokufika ukuze ndifumaneke ngefowuni ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye imiba ekufikeni kwakho. Ndicela ungalibazisi undazise xa kukho into oyidingayo okanye into engasebenzi kakuhle ukuze ndenze ngako konke okusemandleni ukuyilungisa.
Indlu iyazihlola ngekhowudi yomnyango. Ndiyabulela ukwazi ixesha lakho lokufika ukuze ndifumaneke ngefowuni ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye imiba ekufikeni kwakho. Ndicela un…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Morgantown